BUDDHIST TERMS' Dictionary: MINDFULNESS - သတိ
MINDFULNESS - သတိ
သတိ - အောက်မေ့ခြင်း၊ အမှတ်ရခြင်း၊ တစ်စုံတစ်ခုသော အာရုံကို မမေ့ခြင်း။
သတိပဋ္ဌာနသုတ်သည် သတိတရားပွားများရန် ဟောကြားသော သုတ်ဖြစ်သည်။ သတိကို ကုသိုလ်တရားနှင့် ပတ်သက်သော အမှတ်ရမှုများအတွက်သာ သုံးသည်။ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးတွင် သမ္မာသတိမဂ္ဂင်သည် သတိပင် ဖြစ်သည်။ သတိကိုပင် မမေ့လျော့ခြင်းတရား အပ္ပမာဒတရားဟုလည်းခေါ်သည်။
The Satipaṭṭhᾱna Sutta isadiscourse on the methods of cultivating mindfulness. Sati isaterm denoting mindfulness in respect of meritorious actions only. It is one of the eight constituents of the Ariya Path where it is termed as sammᾱsati, right mindfulness. It also goes by the name of appamᾱda, heedfulness.
See also HEEDFULNESS.